Warshadda Shiinaha ee Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Donghua
DHUA Acrylic Mirror Stic stickers ayaa si fiican loogu abuuray howlahaaga DIY. Muraayaddan muraayadda ah ee darbiga ku dhejisan waxay ka samaysan tahay balaastik caag ah, dusha sare ayaa ka tarjumaya oo dhabarka ayaa leh xabag laftiisa, way fududaan kartaa in la dhajiyo oo laga saaro iyada oo aan waxyeello u geysan derbigaaga, looma baahna aalado kale oo lagu dejiyo. Qurxinta acrylic derbigu waa mid aan sun ahayn, aan friib lahayn, ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga daxalka.
• Lagu heli karo cabbirro badan oo kala duwan ama cabbirka caadada ah
• Waxaa lagu heli karaa lacag, dahab ECT. midabbo badan oo kala duwan ama caadooyin leh
• Waxaa lagu heli karaa lix geesleyaal, wareega wareega, wadnaha ect. qaabab kala duwan ama caadooyin leh
• Lagu siiyay filim difaac leh dusha sare, dhabarka is-koolada
Muraayada Muraayada Muraayada, Warqadaha Muraayadaha Acrylic-ka ah ee La-Bixin Karo DIY Wall Qurxinta Muraayada Muraayada Aan Muraayadaha ahayn Guri Qurxinta Qolka Jiifka
Naqshad muraayad qurxoon oo qurxan oo loogu talagalay gurigaaga ama xafiiskaaga ayaa qolkaaga siin doonta muuqaal nasasho leh, waxay abuuri doontaa jawi xiiso leh waxayna siin doontaa taabasho la yaab leh gudahaaga.
Dhua derbiga muraayaddaGo'aanka istiikarka ah wuxuu ka sameysan yahay balaastik caag ah, dusha sare ayaa ka tarjumeysa gadaalna wuxuu leeyahay xabag laftiisa; Waxaa jira filim ilaalin ah dusha muraayadda si looga hortago in muraayada la xoqdo, looma baahna qalab dheeri ah oo ku saabsan dejinta.
Qurxinta darbigan loo yaqaan 'acrylic wall' waa mid aan sun lahayn, oo aan cadayn karin, ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga daxalka. Waa sida muuqata oo milicsiga sida muraayada fasalka, laakiin ma ahan mid fiiqan oo jilicsan oo aan waxyeello lahayn.
Waxyaabaha: Caaga, akril
Midab: Lacag, Dahab ama midabbo badan oo muraayad ah
Cabbirka: Cabbirro badan ama cabbirka caadada
Qaab: Hexagon, wareega wareega, wadnaha ect. qaabab kala duwan ama caadooyin leh
Codsi: Meelo siman oo nadiif ah oo ay ku jiraan muraayad, leben dhoobada dhoobada ah, caag, bir, alwaax iyo rinjiga cinjirka
Waxaad ubaahantahay inaad ka siideyso filimka difaaca, waxay soo bandhigi doontaa saameyn muraayad saafi ah
U baahan tahay inaad ku dhegto dusha sare ee siman
Material Waxyaabaha Tayada Sare leh】: Kuwan derbiga muraayaddadecal decal wuxuu ka samaysan yahay akrilik, khafiif ah oo waara. Dusha sare waa milicsi dhabarka ayaa leh xabag laftiisa; Dusha sare ayaa leh filim ilaalin ah, si loo helo dareen wanaagsan iyo muraayado nadiif ah. Kahor dhajinta fadlan nadiifi darbiga, fadlan iska bixi oo ku dheji badeecada dusha sare markii aad isticmaaleysid.
【Cabbir, Midab & Qaab】: Muraayadda looxa ayaa si fudud loogu been abuuri karaa qaab kasta oo la doonayo, wuxuu ku yimaadaa midabbo iyo cabbirro badan oo kala duwan
Waxqabadka ction: Naqshadeynta muraayadda qurxinta ayaa gurigaaga ka dhigeysa mid ka duwan, soo jiidasho leh; Dusha sare ee milicsiga ayaa ka dhigi kara qolkaaga mid dhalaalaya. Waxyaabaha DIY ayaa kuu keenaya farxad, la shaqeynta carruurtaada, ka caawinta ilmahaaga inuu yeesho caqli ..
Vable La saari karo oo la xoqin karo】: The muraayadda darbigas sticker qurxinta way fududaan kartaa in la dhajiyo oo laga saaro iyada oo aan waxyeello u geysan derbigaaga. waxaa jira filim ilaalin ah dusha sare ee muraayadda si looga ilaaliyo in muraayada la xoqdo, fadlan ka fiiq inta la isticmaalayo, muraayada ayaa cadaaneysa. Fadlan la soco in muraayada uu ku jiro filimka difaaca ay mugdi leeyihiin
【Si fudud loo rakibo】: The istiikarada muraayadda darbigasi fudud ayaa loogu hagaajin karaa dhajinkooda dambe waana laga saari karaa iyada oo aan waxyeello u geysan derbigaaga. Looma baahna qalab dheeri ah oo ku saabsan dejinta. Kaliya iska siib filimka gadaashiisa kuna dhaji dusha sare ee aad dooratay, sida dusha, derbiyada, albaabada, daaqadaha, iyo armaajo. Ka dibna ka fiiq filimka difaaca hore.
【Ammaan iyo Biyo la'aan】: Muraayadda darbiga ee DIY waxay ka sameysan tahay acrylic, maaddadani waa mid aan sun ahayn, ka hortagga deegaanka, aan la xakamayn karin, ka-hortagga daxalka. Muraayadaha muraayadda muraayaddu waa sida muuqata oo milicsanaya sida muraayada fasalka, laakiin ma ahan mid fiiqan oo jilicsan oo aan waxyeello u geysan. Ku raaxee oo ku raaxee jawi nabdoon intaad u habeynayso go'yaashaaga muraayadaha oo ay la socdaan socodbaradkaaga iyo carruurtaada kormeerkaaga ah iyadoo aanad ka walwalin wax dhaawacyo ama shilal ah Ka ammaan badan muraayaddii hore!
【Codsi Ballaaran: Muraayaddan muraayadda dhejiska ah ee looxa loo yaqaan 'acrylic alwaax' ayaa si fiican loogu abuuray howlahaaga DIY. Muraayadaha muraayadda ah ayaa lagu dabaqi karaa meel kasta oo siman oo nadiif ah sida derbiyada, albaabada, daaqadaha, armaajo, iyo wixii la mid ah, oo ku habboon qolka fadhiga, qolka carruurta lagu ciyaaro, qolka cuntada, jikada, jimicsiyada, xafiiska guriga, wadiiqada, darbiga asalka ah ee TV, fadhiga salootada gidaarka gadaashiisa, qolka jiifka sariirta gadaashiisa iyo alaabooyinka kale ee qurxinta derbiga hal-abuurka leh, ku rakib si ay booska uga dhigto mid muuqda oo ifaya.
TALLAABADA 1: Fadlan nadiifi dusha sare halka aad rabto inaad ku dhejiso istiikarada.
FIIRO GAAR AH: Haddii darbigu aanu kala caddayn, dadka wax ku dhajiya waxay ku dhici doonaan 24 saacadood gudahood.
TALLAABADA 2: Ka qaad warqada dambe ee difaaca, ka dibna ku dheji gidaarka ama dusha kale.
TALLAABADA 3: Waxaa ku yaal afaafka hore filim difaac ah. Ka nadiifi filimka ilaaliya qalabka wax lagu duubo oo si tartiib ah u nadiifi dusha sare.
Kani maahan muraayad, runti looma isticmaali karo muraayad beddel ah maadaama kuwani yihiin uun saameyn. Waxaa jira filim difaac ah oo loo isticmaalo in lagu ilaaliyo dusha sare. Fadlan ka fiiq intaadan isticmaalin.
Q1: Donghua ma tahay soo saaraha tooska ah ee OEM?
J: Haa, gabi ahaanba! Donghua waa soo saaraha OEM ee soosaarka balaastikada balaastigga ah tan iyo sanadkii 2000.
Q2: Macluumaad intee le'eg ayaan ku siinayaa qiimaha?
J: Si loo bixiyo qiimaha saxda ah, waxaan rajeyneynaa in macaamiisha ay noo sheegi karaan waxyaabaha, qeexitaanka sida dhumucda, cabbirka, oo leh dhejis ama aan ahayn, imisa midab oo daabacan, faahfaahinta xiriirka, tirada loo baahan yahay, Cabbirka iyo Qaababka faylasha farshaxanka.
J: T / T, Hubinta Ganacsiga Alibaba iwm 30% deebaaji, 70% kahor rarka. Sawirro ama fiidiyoow wax soo saar ballaaran ayaa loo diri doonaa kahor rarka.
Q4: Waa maxay shuruudahaaga gaarsiinta?
Q5: Sidee ku saabsan waqtiga dhalmadaada?
J: Badanaa 5-15 maalmood. Marka loo eego tiradaada.
Q6. Sideen ku heli karaa tijaabooyinka qaarkood? Waa maxay siyaasadaada muunadaadu?
A: Waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino qadar cayiman oo ah shaybaarro joogto ah oo bilaash ah oo ay ku jiraan khidmadaha rarka
muraayad acrylic warqad
muraayadda derbiga lagu qurxiyo
muraayadda istiikarka derbiga
muraayadaha derbiga qurxinta
muraayadda darbiga lagu qurxiyo
istiikarada muraayadda darbiga
muraayadda gidaarka qurxinta guriga